Gordon G, Menkhorst P, Robinson T, Lunney D, Martin R. & Ellis M (2008). Koala. In: IUCN 2008. IUCN Red List of Threatened Species. Retrieved 30 October 2008.
မောင်ဝင်းနိုင်၏ တိရစ္ဆာန်ရုံနှင့် တိရစ္ဆာန်များ စာအုပ်မှ၊ ၁၉၆၉၊ နိုဝင်ဘာ